Kutaura paIndaneti - PetrPikora.com
Nokutaura mubasa iri rekutsvaga, iwe unobatanidzwa mukukudziridza kweuchenjeri hwekuvaka iwe uri chikamu che. Ivai vasina kufa!
Artificial Intelligence (Artificial Intelligence, AI) isayenzi yepakombiyuta inonyanya kugadzirwa kwemichina inoratidza zviratidzo zvekuchenjera. Tsanangudzo ye "maitiro ekuchenjera" achiri chidzidzo chekukurukurirana, chinowanzoshandiswa sechiyero chekuchenjera kuburikidza nefungwa dzevanhu. John McCarthy akauya ku1955 kokutanga.
Tsvakurudzo yekushandura inyanzvi inonyanya kuzivikanwa uye inokosha, uye inoparadzaniswa mumasangano akawanda ayo asingagoni kuwaniswa. Zvose zvitsvakurudzo zvinopatsanurwawo mumatambudziko akawanda emagetsi; Vamwe subfield zvinetso zvinoshanda Somuenzaniso, vamwe kuna kushandisa chaizvo zvishandiso kana kuzadzisa zvakananga mafomu. Mubvunzo ndewokuti kana zvichibvira kuvaka chakagadzirwa njere chiri hunonyatsobatana dambudziko pfungwa, pamwe mubvunzo Masvomhu kuitwa uropi hwomunhu pachahwo kana mubvunzo yemhindumupindu kuti zvishande kugona. Mafilosofi akafanana euchenjeri hwekugadzira zvinhu akafanana.
The huru nyaya iri tsvakurudzo zvinosanganisira chakagadzirwa njere pfungwa, ruzivo, kuronga, kudzidza, dzinongoitika mutauro kubudiswa (kukurukura), maonero uye kukwanisa kufamba uye vanodzika zvinhu. Kugona mukuru njere ichiri mumwe chikuru zvinangwa kutsvakurudza mumunda uyu.
Chakagadzirwa Neural network iri chakagadzirwa ungwaru vane maitiro muenzaniso tsamba chaivo hurongwa. Zvinosanganisira computational yemashoko Tutsinga tunofambisa mashoko utwu kuti wokushandura anonongedzera kune mumwe uye kuchinja navo achishandisa kuchinjwa basa kune imwe "Tutsinga tunofambisa mashoko utwu".
Genetic zvirongwa haasi kutaura nzira kuti kugadzirisa zvinetso chakagadzirwa akachenjera, asi Kazhinji programmatic nzira, iyo pane kunyora imwe algorithm nokuda nekugadzirisa basa iri nokutarira shanduka kwacho nzira.
The nyanzvi kwava purogiramu yepakombiyuta ine basa pakupa zano nyanzvi, sarudzo kana dzinokurudzira chaizvo dambudziko situaci.Expertní hurongwa yakagadzirirwa kuitira kuti kubata non-Numeric uye kujeka ruzivo chedzimudzangara mabasa kuti hazvigoni kugadziriswa zvetsika algorithmic dzokuvhiya.
Chidzidzo chekushandisa chikamu chechidiki chengwaru yehupenzi inobata nekugadzirisa maitiro uye nzira dzinobvumira kombiyuta kuti 'dzidze'. Kudzidza mune chimwe chiitiko chinoreva kushanduka mukati memamiriro ekunze ehurongwa huchaita kuti zvienderane nekuchinja mumamiriro ezvinhu.